Famonoan-tena ara-toekarena ny fahitana ny fizahantany any Hawaii vaovao, saingy tsy tokony "hiresaka maimbo"
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Famonoan-tena ara-toekarena ny vina fizahan-tany vaovao any Hawaii, saingy tsy tokony hiresaka ”maimbo»
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Editorial • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Famonoan-tena ara-toekarena ny vina fizahan-tany vaovao any Hawaii, saingy tsy tokony hiresaka ”maimbo»
John De Fries, filoha sady CEO an'ny Hawaii Tourism Authority
Hadinoy ny krizy COVID-19, raketo an-tsoratra ny fahafatesan'ny COVID sy ny statistika any Hawaii. Adinoy ny fahatongavan'ireo mpizahatany izay tonga tampoka roa herinandro lasa izay ary efa nandohalika izy izao.
Ny fifanakalozan-kevitra lehibe indrindra ho an'ny manampahefana fizahan-tany any Hawaii dia ny fomba hanakiviana ny fivezivezena sy ny nofinofy ny fomba fiaina Hawaii izay tsy naharitra nandritra ny am-polony taona maro. Misy faniriana ho faty ho an'ny fizahantany ao amin'ny Aloha Fanjakana?
Raha ny Birao fizahantany any amin'ny ankamaroan'ny faritra any Etazonia sy izao tontolo izao dia maniry fatratra ny hahita fomba hitsenana ireo mpitsidika bebe kokoa, hanohana ny indostria, ny Hawaii Tourism Authority dia toa nieritreritra fomba hanakiviana ity sehatra ity fa tsy.
Mety tsy hiseho toa ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii iny masoivohom-panjakana novatsian'ireo mpandoa hetra any Hawaii ary miandraikitra ny fahasalamana sy fampiroboroboana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Hawaii.
Ny fizahantany no indostria lehibe indrindra any Hawaii. Ny ankamaroan'ny olona 1.6 tapitrisa monina ao amin'ny fanjakana 50th US dia miankina mivantana na tsia amin'ny indostrian'ny mpitsidika.
Hatramin'ny 9 septambra 2020 dia nijanona tao amin'ny HTA ny fifandraisana rehetra. Tamin'ny 9 septambra no andro Andriamatoa John de Fries dia lasa CEO an'ny Hawaii Tourism Authority.
Hatramin'ny 9 septambra 2020 dia tsy nisy torolàlana, tsy nisy fanambarana mifandraika amin'ny COVID sy ny fizahantany. An-tapitrisany amin'ny volan'ny mpandoa hetra, ny HTA dia tsy nahavita nitondra ny krizy tamin'ny anaran'ny Fanjakana Hawaii sy ny mponina tao.
Ny telefaona tao amin'ny HTA dia efa naneno nanomboka ny volana martsa 2020, izay tsy misy olona horesahina. Tsy afaka niresaka tamin'i Andriamatoa de Fries velively ity publication ity.
Andriamatoa de Fries dia tsy nanatrika hetsika an-gazety indray mandeha, nanao fanambarana izay mety hanampy sy hamporisika ny mpitsidika, afa-tsy ny famoahana statistika sy fanaovana fanambarana hanakiviana ireo mpitsidika.
HTA dia nivadika an'ity masoivoho lavitra ity izay nofinofisin'ny olona ny kolontsaina Hawaii, ny tany eto an-tany ary miady amin'ny fizahan-tany be loatra indraindray tsy misy fizahan-tany.
Ny firesahana ny olan'ny tontolo iainana, ny fizahan-tany be loatra, ny teratany Hawaii ary ny fizahan-tany ara-kolotsaina dia olana manandanja indrindra amin'ny fotoana mahazatra. Angamba mety tsy tsikaritry ny HTA. Mandeha an-tsambo hamaky ny vonjy taitra ratsy indrindra natrehin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany izahay.
eTurboNews dia nanantona ny mpandray anjara tao Hawaii, ao anatin'izany ireo vondrona hotely, trano fisakafoanana, fivarotana. Fanamarihana, raha misy tsy tafiditra ao anaty firaketana fotsiny. Tsy nisy te hiteny na inona na inona. Aza miteny maimbo!
Mufi Hannemann dia izao ny Pmponina & CEO an'ny ny Fikambanan'ny Hawaii sy ny fizahantany any Hawaii. Izy no ben'ny tanàna faha-12 an'ny City & County of Honolulu, tanàna lehibe indrindra faha-13 any Etazonia. Andriamatoa Hannemann dia tsy namerina antso na mailaka na hafatra media sosialy hatramin'ny nanombohan'ny COVID-19
Aza miresaka maimbo!
Ity no fomba Hawaii!
Ny manampahefana fizahan-tany Hawaii dia be atao ary nahavita zava-bita lehibe tao Mlahateny alama Kuu Home.
Ity no lazain'i Andriamatoa de Fries momba ny Malam Kuu:
Raha adika, ny "fikarakarana ny trano malalako" dia fanamafisana visceral ho ahy manokana; raha manaiky ny fahaizana voajanahary ho an'ny olombelona hahatsapa ho faka sy tompon'andraikitra amin'ny toerana niaviany na toerana onenan'izy ireo sy iantsoany an-trano izy ireo.
Manaraka izao ny fianjadian'ny areti-mandringana sy toekarena manerantany, i Hawai'i dia miatrika fanamby maro tsy voatanisa - eo amin'izy ireo ny fisokafan'ny indostrian'ny fizahantany eto amintsika, amin'ny fotoana mety ahatsapana fanahiana lehibe sy mihombo eo amin'ny vondrom-piarahamoninay sy ny fanjakanay manontolo.
Ny famirapiratan'ny fanantenana kosa dia hita amin'ny faharetana sy ny famoronana ataon'ny mpitondra ao Hawaiʻi na amin'ny sehatra miankina na tsy miankina; ary ekeko am-panajana ireo nenitoà, dadatoa, ray aman-dreny, kūpuna, tanora, mpanazatra, mpampianatra, minisitra sns ... izay eo am-piandohana isan'andro mitady vahaolana avy hatrany sy antonony, ho an'ny fianakaviany, ny manodidina azy, ny sekoly, ny fiangonana, orinasa kely, tsy mitady tombombarotra ary orinasa. Raha ny tena izy, ireo hetsika tsy miankina izay miseho isan'andro avy any Polihale, Kauaʻi ka hatrany amin'ny Kumukahi Point any amin'ny nosy Hawaii dia samy manana ny toe-tsaina sy ny votoatin'ny tranon'ny Mālama Ku'u Home - satria na inona na inona fiaviantsika ara-pirazanana, ny fotokevitra fototra momba ny "fikarakarana ny tranoko malalako" dia tafiditra amin'ny tenantsika manokana sy ny ADN miaraka.
Ny làlan'i Hawaii mankany amin'ny fanarenana ara-toekarena sy ny fanatsarana ny fiadanam-piarahamonina dia mitaky ambaratonga fifantohana, fiaraha-miasa, fiaraha-miasa, fandrindrana ary fitarihana mpanatanteraka mitambatra manerana ny sehatra rehetra.
Mampalahelo fa ity adihevitra lehibe ity, fandalinana tsara tarehy, horonan-tsary fohy ary fampisehoana dia tsy hamaha ny krizy fizahan-tany COVID-19 ho an'ny fanjakana. Ny fiadanam-pon'ireo mponina, ao anatin'izany ireo olona tsy manan-kialofana, raharaha fifanampiana ary ny hafa dia miankina amin'ny vola azon'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Nanambara ny famerenana ny Kukulu Ola sy ny Aloha Programme Aina 15 Septambra 2021
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia nanambara fa mamerina ny Kukulu Ola ary Aloha Fandaharana Aina ary mitady tolo-kevitra avy amin'ny fiarahamonina. Ny HTA dia namoaka Request for Proposals (RFP) roa hanomezana fanampiana ara-bola ho an'ireo fikambanana tsy mitady tombom-barotra tsy manam-bola izay hitahiry ny kolontsaina Hawaii ary hitahiry ny harena voajanahary amin'ny 2022.
HTA dia mamoaka ny drafitra fitantanana fizahan-tany miorina amin'ny vondrom-piarahamonina any Oahu, 31 Aogositra 2021
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia namoaka ny 2021-2024 Oahu Destination Management Action Plan (DMAP), torolàlana amin'ny fanarenana, famaritana ary famerenana ny làlan'ny fizahantany ao Oahu. Ny drafitra miorina amin'ny fiarahamonina dia ampahany amin'ny asan'ny HTA mankany amin'ny Malama Kuu Home (mikarakara ny tranoko malalako) sy ny ezaka haingana vitany hitantanana ny fizahantany amin'ny fomba fanavaozana.
Ny governoran'i Hawaii David Ige dia namporisika ireo mponina sy mpitsidika hampihena ny dia tsy ilaina
Ny governora David Ige androany dia niantso ny mponin'i Hawaii sy ny mpitsidika hampihemotra ny dia tsy ilaina rehetra amin'ny faran'ny volana oktobra 2021 noho ny fitomboan'ny tranga COVID-19 haingana izay mihoa-pampana ny tobim-pitsaboana sy loharanon-karenan'ny fanjakana ankehitriny.
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia nanambara androany ny pivot ho lasa fikambanana fitantanana fitodiana mahomby kokoa sy ny fampiroboroboana ireo tompon'andraikitra roa lehibe izay hanampy amin'ny fitarihana ireo hetsika voalaza ao amin'ny drafitra stratejika momba ny 2020-2025 an'ny HTA.
Hawaii Fahefana fizahan-tany dia nanambara ny fandaminana indray mankany amin'ny fitantanana ny tanjona ka misy ny fampiroboroboana roa ny 26 Jolay 2021
Ny HTA dia nandamina ny firafiny sy ny asany mba hanohanana ny tanjon'ny Malama Kuu Home (mikarakara ny tranoko malalako) amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fizahan-tany famerenana amin'ny laoniny. Ny HTA dia manolo-tena hanome hery ny vondrom-piarahamonina mba hanana feo lehibe amin'ny ho avin'ny fizahan-tany, miaraka amin'ny fanamafisana ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana, ny fitohizan'ny kolontsaina Hawaii, ny fanekena ireo kolontsaina marolafy i Hawaii ary ny fanohanana ny vokatra ara-toekarena tompon'andraikitra.
Ny manampahefana fizahan-tany any Hawaii dia manohana ny fandaharanasa hanalefahana ny fiantraikan'ny mpitsidika ao amin'ny Lohasahan'i Pololu, Nosy Hawaii, 9 Jolay 2021
Ny lohasahan'i Pololu dia faritra manintona sy manan-tantara any Kohala Avaratra amin'ny nosy Hawaii. Vao haingana izay dia nisy fitomboana haingana ireo mpitsidika ny morontsiraka Pololu Lookout, Trail, ary ny morontsiraka, ary misy ny filàna mitombo mba hanalefahana ny fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina sy ny harena voajanahary sy ara-kolontsaina.
Ny manampahefana fizahan-tany any Hawaii dia miasa mba hanalefahana ny fiantraikan'ny mpitsidika amin'ny làlambe mankany Hana, 8 Jolay 2021
- Ny làlana mahafinaritra mankany Hana, fantatra amin'ny anarana hoe Hana Highway, dia iray amin'ireo toerana mahaliana ny mpitsidika an'i Maui, izay nanjary fitohanan'ny fifamoivoizana vokatry ny fijanonana tsy ara-dalàna sy ny fiampitan'ny mpandeha an-tongotra an-dalambe. Mba hanampiana amin'ny fanalefahana ny toe-java-misy ho an'ny mponina ao Hana, ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia manohy miara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny faritany Maui sy ireo masoivohom-panjakana hafa, ary manolo-kevitra mafy ihany koa ireo mpitsidika hanatevin-daharana ny fitsidihan'ny orinasa mpizahatany nahazo alalana fa tsy hitondra fiara samirery na mitsidika faritra hafa any Maui.
Ny manampahefana fizahan-tany any Hawaii dia manohana ny fampielezana ny festival Merrie Monarch sy ny Pop-Up Makeke, 1 Jolay 2021
- Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia faly manohana ny fandefasana ny 58th Fetiben'ny mpanjaka Merrie fanao isan-taona ary ny Andiany 3 amin'ny Pop-Up Makeke izany dia handeha mandritra ny festival. Ity no 11th taona nanohanan'ny HTA Merrie Monarch Festival ny HTA. Ny kolontsaina Hawaii dia iray amin'ireo andrin'ny HTA efatra ao aminy Drafitra stratejika 2020-2025, izay adika koa amin'ny Teny Hawaii.
HTA dia mamoaka ny valin'ny fanadihadiana momba ny sentiment 2021, 24,201 Jona XNUMX Jona
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia namoaka ny valin'ny fanadihadiana momba ny sentiment tamin'ny lohataona 2021 nandritra ny fivorian'ny filankevi-pitantanana ny volana jona androany. Ny fanadihadiana dia nahitana fa na dia maro aza no miahiahy amin'ny fitomboan'ny indostrian'ny mpitsidika, ny ankamaroan'ny mponina ao Hawaii dia mino fa ny fizahantany dia mendrika ny olana mifandraika amin'ny indostria.
Ny manampahefana momba ny fizahantany Hawaii dia nanangana ny fampielezan-kevitr'i Malama Hawaii Fanentanana tamin'ny 1 Jona 2021
Hawaii dia manasa ireo mpandeha hiaina ny Nosy Hawaii amin'ny sehatra lalindalina kokoa miaraka amin'ny fanamafisana bebe kokoa ny fifandraisana amin'ny kolontsaintsika, miverina any amin'ny toerana itadiavana azy ary hitahiry azy amin'ny ho avy, ary manaraka ny fomba fanao ara-pahasalamana azo antoka. Izany no hafatra ao ambadiky ny andian-dahatsoratry ny horonantsary mampientam-po sy fanabeazana nolalaovin'ny mpitsidika alohan'ny sy rehefa tonga any Hawaii izy ireo. Izy io dia ao anatin'ny fampielezan-kevitra momba ny varotra Malama Hawaii, izay natomboka tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa teo amin'ny Hawaii Tourism Authority (HTA) sy ny Hawaii Visitors and Convention Bureau (HVCB).
Ny birao manampahefana misahana ny fizahan-tany any Hawaii dia mifidy an'i George Kam hanompo amin'ny maha-mpitarika azy, 30,2021 aprily
Ny birao mpitantana ny fizahan-tany any Hawaii (HTA) dia nifidy an'i George Kam ho seza vaovao mandritra ny omaly fivorian'ny birao isam-bolana. Taloha lefitra no nanompoany. Kam dia mpitarika vondrom-piarahamonina mavitrika ary mpanatanteraka teo amin'ny sehatry ny surf.
“Ao anatin'ny vanim-potoana 'huliau' na fanovana fanovana isika. Ity no fotoananantsika mitady vahaolana mankany amin'ny mpivahiny pono izay mampifandanja ny fahafahan'ny fizahan-tany sy ireo fanamby atolotry ny vondrom-piarahamonintsika. Ny fizahantany dia mety ho mpanentana hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny olona rehetra any Hawaii. Ny fitadiavana fifandanjana dia ny sisin'ny hareza, ny sakan'ny ahitra pili, ”hoy i Kam. "Manantena ny hiara-hiasa amin'ny vondrom-piarahamonina, ny olom-boafidintsika, ny ekipa HTA ary ny birao HTA izahay hahita ny fifandanjana."
HTA dia mamaly ny kinova farany an'ny HB862, 9 aprily 2021
John De Fries, filoha sady tale jeneralin'ny Hawaii Tourism Authority (HTA), dia namoaka ity fanambarana manaraka ity izay namaly ny Komitin'ny Antenimieran-doholona Hawaii momba ny fomba sy ny fomba ary ny varotra ary ny fiarovana ny mpanjifa amin'ny fampiasana tsinay farany ary manolo ny paikady handaniana volavolan-dalàna izay manova tanteraka ny fomba hanehoan'ny masoivohon'ny fizahantany ny fanjakana sy ny ezak'izy ireo hiara-hiasa amin'ny fiarahamonina ary hamerina amin'ny laoniny ny fizahantany.
HTA dia mamoaka ny drafitra fitantanana fizahan-tany miorina amin'ny vondrom-piarahamonina ho an'ny Nosy Hawaii, 1 aprily 2021
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia namoaka ny 2021-2023 Planin'ny hetsika fitantanana fitantanana Island Island (DMAP). Ampahany amin'ny vina stratejika HTA sy ezaka mitohy hitantanana ny fizahantany amin'ny fomba tompon'andraikitra sy miverina amin'ny laoniny. Novokarin'ny mponina ao amin'ny Nosy Hawai'i izy, ary niara-niasa tamin'ny County of Hawaii sy ny Island of Hawaii Visitors Bureau (IHVB). Ny DMAP dia mpitari-dalana amin'ny fanarenana, famaritana ary famerenana ny làlan'ny fizahantany ao amin'ny Nosy Hawaii. Izy io dia mamaritra ny faritra ilaina ary koa ny vahaolana hanatsarana ny kalitaon'ny mponina ary hanatsara ny traikefan'ny mpitsidika.
Ny HTA dia namoaka ny drafitra fitantanana fizahantany miorina amin'ny vondrom-piarahamonina ho an'ny Maui Nui, 4 martsa 2021
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia namoaka ny 2021-2023 drafitra fanaovan-java-kendren'ny Maui Nui Destination (DMAP). Ampahany amin'ny vina stratejika HTA sy ezaka mitohy hitantanana ny fizahantany amin'ny fomba tompon'andraikitra sy famerenana amin'ny laoniny. Izy io dia novolavolain'ny mponina tao Maui, Molokai ary Lanai, ary niara-niasa tamin'ny County of Maui sy Maui Visitors and Convention Bureau (MVCB). Ny DMAP dia mpitari-dalana amin'ny fanarenana, famaritana indray ary famerenana ny làlan'ny fizahan-tany amin'ireo nosy telo mandrafitra an'i Maui Nui. Izy io dia mamaritra ny faritra ilaina ary koa ny vahaolana hanatsarana ny kalitaon'ny mponina ary hanatsara ny traikefan'ny mpitsidika.
“Ny trosa rehetra dia ho an'ny mponin'i Lanai, Molokai ary Maui izay nanolo-tena tamin'ny fizotran'ny DMAP ary vonona hiatrika olana sarotra, handray fomba fijery maro samihafa, hikaroka hevitra vaovao ary hamantatra izay laharam-pahamehana azo raisina. Ny fizotran'ny DMAP dia manome rafitra fiaraha-miasa izay entanina handray anjara amin'ny "malama" ireo mpandray anjara - hikarakara, hikolokolo ary hiaro ireo toerana sy fomban-drazana ankamamian'izy ireo indrindra, "hoy i John De Fries, filoha lefitry ny HTA.
Ny HTA dia namoaka ny drafitra fitantanana fizahantany miorina amin'ny vondrom-piarahamonina ho any Kauai, 5 feb 2021
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia namoaka ny 2021-2023 Kauai Destination Management Action Plan (DMAP). Ampahany amin'ny vina stratejika HTA sy ezaka mitohy hitantanana ny fizahantany amin'ny fomba tompon'andraikitra sy miverina amin'ny laoniny. Namboarin'ny mponin'i Kauai, ary niara-niasa tamin'ny Biraon'ny mpitsidika County of Kauai sy Kauai, ny DMAP dia mpitari-dalana amin'ny fanarenana, famaritana indray ary famerenana ny làlan'ny fizahantany ao amin'ny Garden Island. Izy io dia mamaritra ny faritra ilaina ary koa ny vahaolana hanatsarana ny kalitaon'ny mponina ary hanatsara ny traikefan'ny mpitsidika.
Ny drafitra miorina amin'ny fiarahamonina dia mifantoka amin'ny hetsika lehibe izay heverin'ny vondrom-piarahamonina, ny indostrian'ny mpitsidika ary ny sehatra hafa fa ilaina mandritra ny telo taona. Ny hetsika dia nokarakarain'ny andry efatra mifandraika amin'ny drafitra stratejika HTA - Harena voajanahary, kolontsaina Hawaii, fiarahamonina ary fivarotana marika:
Fivoriambe manerantany IGLTA hatao any Milan ny 26 Oktobra ...
Ny sambo Princess Cruises Emerald dia miverina amin'ny ranomasina avo
13.3 tapitrisa tonga eropeana hitondra ny fizahantany any Golfa ...
Sidina avy any Hawaii mankany Samoa Amerikanina amin'ny Hawaiian ...
Mandehandeha mihoatra ny tanànan'ny New York City, Manhattan Zip Code
Sidina KLM vaovao avy any Amsterdam mankany Barbados
Hotely Hawaii Misintona vola bebe kokoa noho ny 2 taona lasa
Paris - Singapour: sidina Air France ho an'ny vaksiny ...
Fampindram-bola vaovao nambaran'ny ePlus
Nesorina ny Washington DC Capitol Hill taorian'ny ...